एक वर्षकाे अवधिमा डेढ खर्ब लगानीका स्वदेशी उद्योग दर्ता - Chandragiri News
Home राष्ट्रिय एक वर्षकाे अवधिमा डेढ खर्ब लगानीका स्वदेशी उद्योग दर्ता
एक वर्षकाे अवधिमा डेढ खर्ब लगानीका स्वदेशी उद्योग दर्ता
२०७८, १० श्रावण आईतवार १४:३५
काठमाडौँ, साउन १० गते । नेपालमा एक वर्षका अवधिमा रु. डेढ खर्ब लगानीका स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु एक खर्ब ५६ अर्ब ६४ लाखको लगानीमा विभिन्न छ शीर्षकका २०३ उद्योग दर्ता भएका उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित २१ उद्योगमा रु. पाँच अर्ब ३४ करोड ८० लाख, ३० ऊर्जामूलक उद्योगमा रु .एक खर्ब ९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख र सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित छ उद्योगमा रु ८० करोड लगानी छ ।
यस्तै, पूर्वाधारका दुई उद्योगमा रु. एक अर्ब ७३ करोड ८० लाख, उत्पादनमूलक ७० उद्योगमा रु. १९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख, खनिज क्षेत्रको एक उद्योगमा रु. १२ करोड ३० लाख, सेवामूलक ३३ उद्योगमा रु पाँच अर्ब ६४ करोड पाँच लाख र पर्यटनसँग सम्बन्धित ४० उद्योगमा रु. १३ अर्ब ४८ करोड ५ लाख लगानी छ ।
उहाँका अनुसार अघिल्लो आवमा रु. एक खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढीको लगानीमा २७७ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा ७४ ले उद्योग दर्तामा कमी आएको हो ।
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ४० उद्योग कमी हुनाका साथै रु. पाँच अर्ब ७८ करोड बराबरकको लगानी लगानी घटेको हो। अघिल्लो आवमा २२३ उद्योगका लागि रु. ३७ अर्ब ८० करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकामा गत आवमा १८३ उद्योगका लागि रु. ३२ अर्ब दुई करोड बराबरको मात्र प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसक्षेत्रमा १०१ उद्योगका लागि रु. १८ अर्ब ३१ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएकोे हो ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रमा तीन उद्योगका लागि रु. ५२ करोड ९० लाख, ऊर्जामा चार उद्योगका लागि रु एक अर्ब ५४ करोड, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १५ उद्योगका लागि रु दुई अर्ब ९५ करोड, १९ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु. दुई अर्ब ८६ करोड र ४१ सेवामूलक उद्योगका लागि रु. पाँच अर्ब ९८ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो ।
नयाँ व्यवस्थानुसार रु. पाँच करोडभन्दा कम लगानीमा नेपालमा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता हुँदैन । न्यूनतम रु. पाँच करोडभन्दा माथि तोकिएका प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि भए पनि उद्योगको सङ्ख्यामा भने कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
Previous articleउद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह
Next articleचन्द्रागिरि नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्ने सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना